ကိုဖြိုး(နည်းပညာ): Sidebar Pro(1.99$ in google play) Android မှာ multitasking အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်န...
Sidebar Pro(1.99$ in google play) Android မှာ multitasking အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်န...
Sidebar Pro(1.99$ in google play)
Android မှာ multitasking အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းအသစ်
မနေ့ကတင်ပေးတဲ့ LMT launcher နဲ့ သိပ်အဆင်မပြေသူများအတွက်
Sidebar Pro လေးထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Version 3.1.0.3 ပါ
Android version 2.1 နဲ့အထက်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်
Widgets,items,choose color,lock items တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်
အကောင်းဆုံးဆု ရထားတဲ့application လေးဖြစ်ပါတယ်
Posted by ko phyo at 1:13 PM
3D Chesela Live Wallpaper
18+ Video Apps For Android
ကွန်ပျုတာ ၊ ဖုန်း ၊ ကင်မရာ ၊ မန်မိုရီကတ်ထဲက မှားဖျ...
ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို Remix လုပ်ပြီး လန်းရအောင်
Bridge Architect v1.2.8 Apk Game 32MB
Face Blender v2.0.6 Apk (4 Mb)
android ဖုန်းအချင်းချင်း bluetooth နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး...
voii phone ( ဖောက်ထွင်းမြင် key pad )
ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာချိတ်ပြီး Internet သုံးမယ်ဆိုရင...
Wise Auto Shutdown Portable 1.12.52
စွဲမက်ဖွယ်ဒီဇိုင်းနဲ့ TSF shell Pro Launcher(lates...
Speed Parking 3D For Android.
Cyber Planet Super Theme GO 1.1 For Android
HD 3D Launcher PRO v1.1.5 Apk 1MB
Dropbox အသုံးပြုသူများအတွက် 50GB ကို rooted androi...
YouWave for Android 4.1.0 Full
Android Application တွေကို PC မှာ သုံးချင်သူတွေအတွ...
Equalizer ကြီးက ပီားထနေတာပဲ ။
Computer နှစ်လုံးကို network အလွယ်ကူဆုံးချိပ်မယ် -...
ဘလော့မှာCSS3 Multi Level Drop Down Menu သုံးနည်း
ဘလော့မှာအလွယ်ကူဆုံး Accordion Menu သုံးချင်ရင်
Auto Scrolling-Recent post
ttKeyboard Pro for iOS 6.x
Window Shutdown ပြသနာဖြစ်နေသူများအတွက် ဖြေရှင်းနည်...
အလေးထားရတော့မယ့် မိုဘိုင်းဖုန်း လုံခြုံရေးစနစ်
Sidebar Pro(1.99$ in google play) Android မှာ mult...
APK ကိုမြန်မာလိုပြောင်းသုံးရအောင် (၂)
APK ကိုမြန်မာမှုပြုရအောင် (၁)
CDMA ဖုန်းအင်တာနက် Setting ချိန်နည်း
Biography of Myanmar Mobile app site